Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday: Aza atao peta-toko re !
Inty sy Nday: Aza atao peta-toko re !
Rahampitso alakamisy no fantatra fa hanao ny fivoriany ny Filankevitry ny filohan’ny oniversite 6 eto Madagasikara, izay eo ambany fiahian’ny fanjakana (oniversitem-panjakana). Handinika ny fomba hamerenana ny fampianarana eny amin’ny oniversite izy ireo, taorian’ny fampiatoana noho ny fianahan’ny resaka pesta.
Azo antoka fa tsy hiandry ela io fiverenan’ny fampianarana eny amin’ny oniversite io satria na ny ankizy zandriny any amin’ny fanabeazana fototra sy ny ambaratonga faharoa aza, efa nanomboka tamin’ny faha-6 novambra ny tratra aoriana indrindra.
Fa na izany na tsy izany, tokony tsy ny famerenana ny fianarana ihany no hodinihana amin’io fivoriana rahampitso io fa ny olana rehetra mety hanelingelina ny famaranana ny taom-pianarana koa. Raha ny marina mantsy dia teo ankatoky ny fotoam-panadinana na tao anatiny ny sasany, no niato izay fianarana teny amin’ny oniversite izay, ka rariny sy hitsiny koa raha mba jerena ireo olana mety hiteraka sakana na fikatsoan’ny fianarana eny.
Tsy anjara-asan’ny filankevitry ny filohan’ny oniversite akory ny mamaha ny olana sasany amin’izany saingy heverina fa rariny sy hitsiny raha mamoaka fehin-kevitra ny fivorian’ny filankevitry ny filohan’ny oniversite enina mba handraisan’ny fitondram-panjakana foibe fepetra ho fisorohana izay tranga metry hampikatso na hisakana ny fizotran’io fampianarana io amin’izao famaranan-taona izao.
Raha tsorina dia misy fitakiana efa nandeha talohan’ny fiatoan’ny fampianarana teo. Toy ny tambin-karaman’ny mpampianatra mpikaroka na ny olana amin’ny trano fonenan’ny mpianatra. Ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpandraharahan’ny oniversite any amin’ny Oniversiten’i Toliara mantsy izao, ohatra, dia nirotsaka eo amin’ny fitokonany satria maro ireo fitakian-dry zareo tsy mbola voavahan’ny fitondram-panjakana.
Raha ny famerenana ny fampianarana fotsiny ka ny famitana ny fanadinana no hihazakazahana dia mety ho tratra ara-potoana ihany na ho vita, fa iza amintsika no afaka hiantoka fa tsy hofihinin’ny mpampianatra mpikaroka ny voka-panadinana raha tsy voavaha ny olana efa nitakian’izy ireo vahaolana tamin’ny fitondram-panjakana tamin’ny fotoanandro ?
Izay no mahatonga anay hilaza hoe « aza atao peta-toko re ny raharaham-pirenena ary iray amin’izany ny tontolon’ny fampianarana sy ny fikarohana eny amin’ny anjerimanontolo e » !
Ny rehetra mantsy dia toa mahatsapa sy mahita ihany fa rehefa ny tombontsoa pôlitikan’ny mpitondra no katsahiny, na ao anatin’ny roa andro aza dia ahitan-dry zalahy vahaolana ny fanatanterahana ny hetsika iray, izay ilana volabe fa tsy hoe mandeha ho azy, fa rehefa ny tombontsoam-bahoaka toa ny fampiharana an’ireo didim-panjakana tamin’ny 2009 momba ny tontolon’ny fampianarana ambony, ka hiantohana ny fahalavorarian’ny asan’ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra no resahina, dia mitari-tongotra sy malaina hamoaka vola na handray fepetra hamahana ny olana ny fitondram-panjakana.
Tokony habaribarian’ny fitondram-panjakana amin’izao fifaramparanan’ny taona 2017 izao ny fahaizany mamaha ny olana mitranga rehetra, ary mba ho tontolom-pifampitondrana sy tontolom-piaraha-monina anjakan’ny rariny sy ny hitsiny no hiaraha-mandray ny taona vaovao 2018.
Toa ho nofy anefa izany.